SONATA-CANTATA: Free English Course for Parents - Day 2
ဗဟုသုတရပါတယ်.. ကျနော်လည်း အဲသလိုအတန်းတွေ တက်ချင်သေးတယ်
ကလေးကတည်းက သင်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာက ကျောင်းမှာလည်း ကျောင်းစာအုပ်ဖတ်ယုံပဲ ရှိခဲ့တယ်.. အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ ဖတ်ပေမယ့် - အပြောတွေလည်း ပါမလာခဲ့ဘူး။ အခု ဒီနိုင်ငံရောက်တော့လည်း အင်္ဂလိပ်လိုက ယောင်လို့တောင် မပြောမိဘူး။ နှုတ်အကျင့်မရှိတော့ အပြောလည်း မရဲဘူး။
မြန်မာလိုရေးထားတာ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားသလိုပဲမို့ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း အဲ့လိုမျိုး သင်ယူချင်လိုက်တာ။ အားကျတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် သီတာရေ..သီတာနဲ့အတူ လိုက်တက်နေရသလိုပဲ...လူတွေရဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးပါ သိခွင့်ရတာပေါ့နော်.. ဟိုအမျိုးသမီးကလည်း သူ့ယောကျာင်္းစိတ်ကြိုက် နေရတဲ့ပုံပဲ..အဲဒီလိုမျိုး favorite colour ရွေးလိမ့်မယ်မထင်မိဘူး.. ကောင်း၏။ ဆက်ပြောဦးနော်.. နားထောင်နေတယ်..
အမနဲ့တူတူ သင်တန်းလိုက်တက်နေတာ။ မေးခွန်းတွေလည်း ဖြေကြည့်သွားတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
day 1 နဲ့2ကို တစ်ထိုင်တည်းဖတ်သွားတယ်...။
ဟုတ်တယ်.. မေးခွန်းလေးတွေက Simple Qတွေပေမယ့် သေချာဖြေရင်တော့ အများကြီးထွက်လာမှာ။ ပျော်ဖို့လည်းကောင်းမှာနော် အန်တီတာ။း)
ဒါနဲ့ သားမေးတာလည်းမဖြေပေးသေးဘူး။း(
Very interesting Ma Thida...
I am waiting for your Day 3...
Comment ကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးကြည့်တာ...